Afhayeenka Dawlada Kenya Oo Fariin Usoo Diray Villa Soomaalia - Allbanaadir Media
Home Warka Maanta Afhayeenka Dawlada Kenya Oo Fariin Usoo Diray Villa Soomaalia
Shir jaraa’id uu ku qabtay Maanta Magaalada Nairobi Afhayeenka Xukuumada ayuu kaga hadlay Xaalada Xiriirka Soomaaliya iyo Kenya,Dagaalkii Buula Xaawo iyo Arimaha Xuduuda Labada Dal wadaagaan.
“Dhamaanteen waxaan dabagal ku sameenay Dhacdooyinkii ka taagnaa muddooyinkii lasoo dhaafay Soomaaliya gaar ahaan Gobolka Gedo.
Kenya waxay muujineysaa in ay ka xun tahay oo Walaac ka qabto dagaalka dhexmaraya Ciidamada Amniga Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland.
Afhayeenka Dawlada Kenya oo sii hadlayey ayaa sheegay in colaadaasi Soomaalida Askarteeda udhaxeysa ay wal walka kusii kordhineyso Dadka Xuduuda Mandheera deggan iyo koror ku yimaada Barakacayaasha Dalkeena kusugan ayuu yiri.
Shirkiisa Jaraa’id ayuu Cyrus Oguna kaga jawaabay Eedii Soomaaliya ee aheyd in Kenya Fara gelin qaawan ku heyso Arimaha Soomaaliya.
“Way iska muuqataa in waxyaabaha dhacayey lagu soo lifaaqay Dhinaca Xuduuda aan la wadaagno Soomaaliya gaar ahaan Mandheera,Ka Dal ahaan, waxaan dooneynaa inaan si cad u sheegno, in aanaan aqbali doonin in lagu been abuuro in siyaasada gudaha ee Soomaaliya fara gelin ku hayaan. Waxaan ugu baaqeynaa Hoggaanka Soomaaliya inay ka waantoobaan inay Kenya ku qasbaan fara gelinta arrimahooda gudaha,ayuu yiri Oguna.
Mar uu ka hadlay In Lagu Eedeeyey Maleeshiyaadka C/rashiid Janan inay Kenya Marti gelisay Ama Hubeysay ayuu ku sheegay mid laga bad badiyey Warkaas oo keliya si la mid ah Soomaali badan Qaxooti ku marti geliyeen loo soo dhaweeyey,inkastoo midaas Janan iyo ciidankiisa si maldahan usheegay.
Shirka Jaraa’id oo qodobo dhowr ah looga hadlay ayaa Kenya waxay soo bandhigtay sida 3 kun Arday Waxbarasho ugu yimaadaan Mandheera weliba kasoo gudbaan Xadka Soomaaliya,8 Kun Qof oo Ganacsi ahaan mandheera ilaa Beled xaawo iskaga gudba,taasna ay muujineyso sida ay yihiin Kenyaanku kuwo ku wanaagsan soo dhaweynta iyo is dhexgalka Bulshada,si nabad ku jirto.
Ugu dambeyn Xukuumada Nairobi oo ka jawaabeysay in Guddigii Xaqiiqo Raadinta IGAD ay dhankeeda la safteen ayaa waxay taas iskaga fogeysay Eedaasi:
“Waxaan nahay dad nabada jecel, dal lagu xukumo sharciga& Kala dambeynta laguna hogaamiyo mabda’a faragalin la’aan ah.
Eedeymahaan Soomaaliya kasoo baxaya ayaa ah kuwo run ka leexasho ah, looguna talo galay in lagu jeediyo dareenka dadka Soomaaliyeed si looga fogaado arrimaha Xaqiiqda ah ee ka jira dhulka Xuduuda Labada Dal.
Marnaba ma dhex geli doonno Arrimaha gudaha ee waddan kasta, waxaanan si siman u filaynaa isu soo celin. Waxaan si kastaba u sii wadeynaa u ololeynta nabada iyo xasiloonida Gobolka, sidaas darteed waxaan ku baaqeynaa in gebi ahaanba la joojiyo dagaalada ka socda Soomaaliya si loo helo nabad Waarta,ayey Xukuumada Nairobi tiri.